Kpọtụrụ Anyị - Get Free BSF Maggot Cultivation Training • Yurie BSF
Kpọtụrụ anyị Yurie BSF - Ị chọrọ ịmalite ịzụlite ikpuru na-enweghị isi? Ma ọ bụ ị nwere ike, ma ihe ndị a apụtaghị na ọ ka na-esi ísì? Yurie BSF dị njikere inyere gị aka, biko kpọtụrụ Yurie BSF site na ụzọ dị iche iche n'okpuru ebe a, Yurie BSF bụ ebe a iji nyere gị aka
Biko kpọtụrụ Yurie BSF ma zigara Yamie Ms. ajụjụ na Tel / WA 0812-2105-2808. Ma ọ bụ kpọtụrụ anyị site na email [Email na-echebe] Dee ozi ị chọrọ ma anyị ga-aza ya ozugbo.
Ajụjụ ọ bụla ọzọ? kpọtụrụ anyị site na telifon ma gwa anyị okwu, gwa ndị ọkachamara okwu. Ị nwekwara ike ịtọ oge ị ga-akpọ ma ọ bụrụ na ị dị njikere ma nye anyị azịza na nhọrọ kacha mma.
Kpọtụrụ anyị Maka Nkwado Ntanetị
A na-esite n'aka ndị na-eduzi na ebe nrụọrụ weebụ Yurie BSF ka ọtụtụ nchịkọta usoro nri. Anyị na-enye ọzụzụ n'efu maka ịzụlite BSF, anyị na-enyekwa nkwado nke aka iji nweta ihe ịga nke ọma. Naanị ị ga-azụta ngwugwu ọrụ ị chọrọ mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụlọ ma ọ bụ n'ugbo gị.
Nhọrọ 99 nke mpaghara ugbo Yurie BSF
Nyochaa azụmahịa mbu, obere, ọkara na nnukwu ọnụ ahịa
Maggot ịzụrụ na ire
Maggot's FAQ cultivation, na
Imelite kwa izu nke maggot cultivation.
Akwụsịla ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
Njikọ aka: Kpọtụrụ anyị, kpọtụrụ anyị, kpọtụrụ yurie bsf, kpọtụrụ anyị